E-News Nepali || Fast and Accuracy » उपनिर्वाचनको ताजा अपडेट : नेकपा ५ ठाउँमा बिजयी हुँदा अन्य दलले खाता पनि खोल्न सकेनन ! धाँधली गरेको कांग्रेसको आरोप !
उपनिर्वाचनको ताजा अपडेट : नेकपा ५ ठाउँमा बिजयी हुँदा अन्य दलले खाता पनि खोल्न सकेनन ! धाँधली गरेको कांग्रेसको आरोप !
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–२ को वडाअध्यक्षमा नेकपाका ढालेन्द्र शेरचनले ७०४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका डिल बहादुर रानाले ४ सय १२ मत प्राप्त गरेका छन्। समाजवादी पार्टीका हरीलाल रानाले ६ मत प्राप्त गरे ।वडाअध्यक्षको निर्वाचनमा नेकपाबाट उम्मेदवार शेरचनलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सघाएको थियो। १२ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसै गरि काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर २ मा नेकपाका उमेदवार विजयी भएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाका उमेदवार देवप्रसाद कोईराला विजयी भएका हुन् । उनले ८६७ मत पाए । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उमेदवार दर्णबहादुर खत्रीले ५८२ मत पाएका थिए । शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा १५०२ मत खसेको थियो ।
त्यसै गरि सल्यानको कुमाख गाउँपालिका–५ को वडा अध्यक्षमा नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । कुमाख गाउँपालिका–५ मा सत्तारुढ दल नेकपाका उम्मेदवार धर्म बुढाथोकी विजयी भएका हुन् । बुढाथोकीले ७ सय ९२ मत प्राप्त गर्दै जित हात पारे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खड्क बहादुर बोहराले २ सय ५१ पाए ।
शनिवार सम्पन्न उपनिर्वाचनमा ११ सय २४ मत खसेको थियो । त्यसै गरी लमजुङको सुन्दरबजार–२ मा सत्तारुढ दल नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । लमजुङको सुन्दरबजार–२ का उम्मेदवार नवीनकुमार श्रेष्ठ विजयी भएका हुन् । उनले ९९३ मत ल्याए। उनका निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका प्रकाश सँढाईले ४८२ मत ल्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति १४ मंसिर २०७६, शनिबार १७:०७